Xukuumadda Soomaaliya oo shegtay in Qalbi dhagax uu ka tirsana Al Qaacida Amni darana uu ka waday Dalalka East Africa | Entertainment and News Site
Home » News » Xukuumadda Soomaaliya oo shegtay in Qalbi dhagax uu ka tirsana Al Qaacida Amni darana uu ka waday Dalalka East Africa
Xukuumadda Soomaaliya oo shegtay in Qalbi dhagax uu ka tirsana Al Qaacida Amni darana uu ka waday Dalalka East Africa
daajis.com:-Dowladda Soomaaliya oo Qalbi Dhagax ku tilmaamtay inuu yahay argagixiso caalami ah oo adduunka dhan laga raadinayey.
Wasiirka Warfaafinta Dowladda Soomaaliya Eng. Yarisow oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay inuu Qalbi Dhagax ahaa argaxiye Caalami ah oo qalqal ku hayey amniga Soomaaliya iyo wadamada Africa gaar ahaan kuwa dariska ah.
Wuxuu sheegay in dowladda Soomaaliya ku saxneyd go’aanka ay Qalbi Dhagax ku dhiibtay, maadaama uu yahay nin amni darro ka waday Qaaradda Africa.
Goor dhow ayaan idiin soo gudbin doonaa qoraalka rasmiga ah ee kasoo baxay golaha Wasiirada Soomaaliya.